दोस्राे चरणको चुनावमा वाम गठबन्धनको पक्षमा दुई तिहाई मत खस्न सक्ने प्रचण्ड-ओलीको निष्कर्ष ! - Everest Dainik - News from Nepal
दोस्राे चरणको चुनावमा वाम गठबन्धनको पक्षमा दुई तिहाई मत खस्न सक्ने प्रचण्ड-ओलीको निष्कर्ष !
चितवन, मंसिर १२ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो निर्वाचनमा बामपन्थी गठबन्धनलाई दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।
मंगलबार बिहान चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २७ पर्साढापमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले मंसिर १० मा भएको निर्वाचनमा बामपन्थीको पक्षमा दुई तिहाइ मत खसेको आफू र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निष्कर्ष रहेको भन्दै मंसिर २१ मा हुने निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका पक्षमा दुई तिहाइ मत खस्ने दावी गरे ।
बाम गठबन्धनका तर्फबाट चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवार समेत रहेका प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा भने ‘केपी ओलीजीसँग आज बिहानमात्रै मेरो आधा घण्टा टेलिफोन कुराकानी भयो, निर्वाचन भएका ३२ जिल्लामा गठबन्धनका पक्षमा दुईतिहाइ मत खसेको छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ । बाँकीमा पनि त्यो सम्भव छ ।’
याे पनि पढ्नुस अरिङ्गाल बन्नुपर्ने बेला आयो– प्रधानमन्त्री
प्रचण्डले थपे ‘हामीले गल्ती गर्यौ भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउन हजारौको बलिदान भएको छ । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको उदाहरण हाम्रा सामु छ । तर, दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान त बन्यो तर, त्यो संविधान कार्यन्वयन होला नहोला भन्ने चिन्ता थियो । त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन भएर स्थानीय सरकार गठन भैसकेको छ । अव प्रदेश र केन्द्र सरकारको निर्वाचन हुदैछ । यो निर्वाचनमार्फत एमाले र माओवादीले ठुलो निर्णय लिएर गठबन्धन बनाएका हौ ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेरी पनि दलाल र समन्तहरुकै हुनेहो कि भन्ने खतरा रहेका बेला एमालेका केपी ओली र माओवादीका प्रचण्ड अध्यक्ष बन्नु संयोग र सौभाग्य नै मान्नुपर्ने भन्दै दुवै नेता पार्टी एकीकरण गरेर सम्बृद्धि र स्थायीत्वका लागि निर्णय लिइएको प्रचण्डको भनाई थियो ।
याे पनि पढ्नुस 'चितवनकाे विकासका लागि माअाेवादी केन्द्रमा अाएँ' : कांग्रेस नेता पाैडेल
प्रचण्डले फुटेका कांग्रेसहरु पनि एक हुन सुझाव दिदै जनतालाई राहत र विकास दिनतर्फ लाग्न आग्रह गरे । पार्टी एकीकरण गर्ने नेपाली जनता र देशको विकासका लागि भएको भन्दै उनले यो निर्वाचनबाट बामपन्थीले बहुमतको सरकार बनाएर ५ बर्ष राम्रो काम गरेपछि ५० बर्ष शासन गर्ने अवसर आउने बताए ।
नेपाल राष्ट्र सम्बृद्ध र धनि भए नेपालको नागरिक जहाँ गएपनि सम्मान पाउने यो अवसर गुम्न नदिन पनि नेपाली जनतालाई प्रचण्डको आग्रह थियो । ‘ स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार एउटै पार्टीको भएमात्र विकासको स्प्रीट मिल्छ त्यसकारण यी सवै विषयलाई ध्यानमा राखेर मत दिन पनि प्रचण्डले आग्रह गरे ।
प्रचण्डले अरु के–के भने ?
–५ वर्ष कम्युनिष्टको स्थायी सरकार बनेपछि ५० बर्ष देश चलाउने अवसर आउनेछ ।
–गरिव राष्ट्र भएपछि धनी राष्ट्रले पैसा भएपनि हेप्छन् राष्ट्र धनि भए कसैले हेप्न सक्दैन ।
–स्थानीय प्रदेश र केन्द्रमा एउटै शक्तिले चुनाव जिते स्पिडमा देशको विकास गर्न सकिन्छ ।
– मेरो पहिचान चितवन नै हो जनतासँग म ऋणि छु । अहिले ऋण तिर्दैछु ।
–महिला आमा समुह र क्लवलाई पैसा दिएर भोट किन्ने गलत संस्कार पाइयो यसको अन्त्य गर्नु जरुरी छ ।
– व्यक्तिले कलो फालेजस्तो पैसा दिने होइन, सरकारवाट निर्णय गराएर बैधानिक रुपमा सहयोग गरिनेछ ।
– सुकुम्बासी समस्या चितवनमा व्याप्त छ ,बामपन्थीको सरकार बनेपछि पहिलो निर्णय नै लालपुर्जा दिने निर्णय गरिनेछ ।